आफु अगाडी बढ्न नसकेकाे अनुभव भए के गर्ने ? ५ टिप्स - ज्ञानविज्ञान
हामीलाइ थाहाँ छ, सफलता भनेकाे निरन्तरकाे यात्रा हाे । कहिलेकाही हामीलाइ अाफु याे बिन्दुबाट अगाडी बढ्न सकिन, एकै ठाउँमा रहे भन्रे महसुस हुन्छ र यसै कारण कतिपय व्यक्ति निराशामा जान्छन् ।
आफु अगाडी बढ्न नसकेकाे अनुभव गरिरहनु भएकाे छ ? अपनाउनुहाेस् यस्ता उपायहरू
तपाइकाे जागिर कस्ताे छ ? तपाइ कुन पदमा रहेर काम गरिरहनु भएकाे छ ? तपाइ अहिलेकाे पदमा भन्दा माथि जाने ठाउँ छ ? के तपाइले काममा नयाँ कुरा सिक्न पाइरहनु भएकाे छ ? यी प्रश्नकाे उत्तर खाेज्नुहाेस् । यदि यी प्रश्नकाे उत्तर नकारात्मक पाउनुहुन्छ भने अर्काे काम खाेज्नुहाेस् ।
जुन कामबाट तपाइ अगाडी बढ्न सक्नुहुन्छ, जुन कामलाइ तपाइले अाफ्नाे भविष्यसँग जाेड्न सक्नुहुन्छ, त्याे काम गर्नुहाेस् ।चुनाैतीहरू अाएनन् भने मान्छे अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यसैले चुनाैतीहरूकाे सामना गर्नुहाेस् । काम या पढाइमा चुनाैती अाएकाे छैन भने पनि अाफैले चुनाैती खडा गर्नुहाेस् ।
सजिलाे बाटाे राेजेर काही पनि पुगीदैन । अाफ्नाे याेजनालाइ हेर्नुहाेस् । तपाइका याेजना तथा लक्ष्य पुरा भए नभएकाे विचार गर्नुहाेस् । त्यही अनुसार अबका लक्ष्य र याेजना तय गर्नुहाेस् ।नयाँ कुरा सिक्न उत्सुक रहनुहाेस् । नयाँ कुरासँग, समाचारहरूसँग अपडेट रहनुहाेस् ।
अाफ्नाे व्याक्तित्व विकासमा ध्यान दिनुहाेस् । अाफ्नाे दैनिकीमा शारिरीक अभ्यास, मनाेरन्जन, अध्यनलाइ सकावेश गर्नुहाेस् ।अाफ्नाे कामसँग सम्बन्धित र अाफुलाइ अगाडी बढ्न सहयाेग गर्न सक्ने मानिसहरूसँग सबन्ध बढाउनुहाेस् । त्यस्ता मानिसहरूसँग नेटवर्क विस्तार गर्नुहाेस् ।
सभा सेमिरनारहरूमा सहभागी भएर सहभागीहरूसँग सम्बन्ध बढाउनुहाेस् ।सामागिक सँजालमा अाफ्नाे पढाइ, अाफ्नाे काम तथा सामाजिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धिग अाफ्ना विचारहरू पाेष्ट गर्नुहाेस् । सामाजिक सँजाललाइ सामान्य कुराकानी भन्दा बढी विचारकाे अादानप्रदान, नयाँ कुराहरूकाे जानकारी, नेटवर्क विस्तारकाे लागी प्रयाेग गर्नुहाेस् ।
डिप्रेसन के हो ? कसरी बाहिर निस्कने ?
दिनभरमा हामी कुनै न कुनै कुराले चिन्तित हुन्छौं । करियरको कुराले, पैसाको कुराले, विफलताको कुराले, साथीभाईको कुराले, शारीरिक रोगको कुराले, छोराछोरीको कुराले, परिवारको कुराले ।मानविय जीवनमा चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । हामी चेतनशिल छौं, चिन्ता हुन्छ नै । तर, जब चिन्तालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं, त्यसले हामीलाई मानसिक रोगी बनाउँछ ।
किनभने चिन्ता एक किसिमको मानसिक विकार हो ।नेपालीमा उखान नै छ, चिन्ताले चितामा पुर्‍याउँछ ।अर्थात चिन्ताले शरीरलाई जिर्ण र रोगी बनाउँछ । यसले हामीलाई सामाजिक जीवनबाट अलग गराउँछ । के विश्लेषण गरिएको छ भने, अबको केही बर्षपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो शारीरिक समस्यामा चिन्ता वा डिप्रेसन देखापर्नेछ ।
चिन्ताको गहिरो रुप डिप्रेसन हो । डिप्रेसन मानसिक समस्या हो । न यसको उपचार औषधीले मात्र संभव छ । न शल्याक्रिया गरेर नै । किनभने मानसिक व्यवस्थापन नै यसको सबैभन्दा प्रभावकारी विधि हो । तर, चिन्ताग्रस्त व्यक्तिलाई मानसिक रुपले ठिकठाक आवस्थामा ल्याउन सजिलो भने छैन ।
चिन्ता र तनावका कारण शरीरमा कति हार्मोन्सको तह बढ्छ, जसमा एडि्रनलीन र कार्टिसोल प्रमुख छन् । लगातार तनाव र चिन्ताको स्थिति बिस्तारै डिप्रेसनमा परिणत हुन्छ ।
डिप्रेसनका मनोवैज्ञानिक लक्षण
१. निरन्तर चिन्ता लिनु
२. स्वास्थ्यको विषयमा चिन्तित रहनु
३. नकारात्मक विचार मनमा आउनु
४. भ्रामक विचार मनमा आउनु
५. काममा मन नलाग्नु
६. स्वभाव चिडचिडा हुनु
७. सानोतिनो कुरामा रिस उठ्नु
८. मनस्थितिमा परिवर्तन
९. पागल जस्तो व्यवहार गर्नु
१०. एक्लै बस्न मन पराउनु
११. नराम्रो सपना देख्नु
१२. कहिल्यै खुशी हुन नसक्नु
१३. कम बोल्नु
१४. डर लाग्नु
डिप्रेसनका शारीरिक लक्षण
२. मुटु काँप्नु
३. खाना निल्नमा समस्या
४. उल्टी आउनु
५. बारम्बार बाथरुम जानु
६. शरीर पहेँलो हुनु
७. श्वास प्रश्वास छोटो हुनु
८. रिंगटा लाग्नु
९. मांसपेशीमा दुखाई
१०. मुटुको धड्कन बढ्नु
११. शरीर काँप्नु
१२. पसीना आउनु
१३. ब्लड प्रेसर घटबढ हुनु
१४ थकावट हुनु
१. विषयबाट ध्यान हटाउने
२. डिप्रेसनको कारण थाहा पाउने
३. भविष्यको चिन्ता नलिने
५. गीत सुन्ने
६. भावनाहरु सेयर गर्नु
७. नशाबाट जोगिने
९. हास्ने कला सिक्ने
१०. एक्लै नबस्ने
एक्लोपना डिप्रेसनको एउटा प्रमुख कारण हो । यदि तपाईंको परिवारमा कोही डिप्रेसनबाट पीडित छ भने जति सकिन्छ उसँग समय बिताउनुस । अत्यधिक डिप्रेसनको अवस्थामा मानिसहरुमा आत्महत्याको विचार आउने गर्छ । त्यसैले उसलाई सकभर एक्लै छोड्नु हुँदैन ।
Don't Miss it पेस्ता सेवन गर्नाले हुने अद्भूत फाइदाहरु जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, जान्नुहोस् के रहेछ त ?
Up Next अफ्ठ्याराे परिस्थितिमा यसरी आफैसँग कुरा गरेर पनि अगाडी बढ्न सकिन्छ ?
यस्ता छन्, केहि खानेकुरा जसले सुगरका रोगीको स्वास्थ्यमा फाइदा पुराउछ
१. निलो बयरः निलो बयर अथवा ब्लुबेरी त्यस्तो फलको परिवारमा पर्दछ जसमा फ्लेभोनोइडको मात्रा अत्यधिक रहेको हुन्छ । फ्लेभोनोइड एउटा यस्तो…
मोजा नलाई जुत्ता नलगाउनुहोस् कैयौं रोग लाग्ने जोखिम हुन्छ
१८–२५ वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरूमा मोजा नलाई कमसल जुत्ता लगाएका कारण अनेकौं रोग लाग्ने जोखिम अत्यन्त बढेको छ । आजकल…